तर sarcoidosis तपाईंलाई असर गर्दैछ, SarcoidosisUK जो पनि हामी तपाईंलाई समर्थन गर्न सक्दछ गर्न को लागी प्रतिबद्ध छ। तलका समर्थन सेवाहरूको हाम्रो दायराको बारे बढि जान्नुहोस्।
SarcoidosisUK को समर्थन हबमा स्वागत छ।
SarcoidosisUK जान्दछन् कि सरकोडोसिस रोगीहरूले अक्सर उनीहरूको आवश्यकता वा योग्यता प्राप्त गर्दैनन्। हामीले तपाइँलाई सुनेका छौं र सरकोडोसिसद्वारा प्रभावित व्यक्तिलाई सहयोग पुर्याउने सेवाहरू प्रदान गर्दछौं।
हामी मरीहरूलाई एकसाथ जोड्न चाहन्छौं ताकि तिनीहरू एकअर्कालाई सहयोग गर्न सक्दछ। हामी आवश्यक बेला अतिरिक्त चिकित्सा सहयोग पनि प्रदान गर्दछौं। हाम्रो लक्ष्य सार्कोडोसिस द्वारा प्रभावित व्यक्तिलाई व्यर्थ र बुझ्दछ जसले कसैलाई बोल्न सक्षम छ भनेर यो सुनिश्चित गर्न हो।
SarcoidosisUK नर्स मद्दतलाइन 2016 मा स्थापित भएको थियो र 400 भन्दा बढि कलका साथ बोलाइएको छ; धेरै विभिन्न तरिकाहरुमा sarcoidosis द्वारा प्रभावित मान्छे। कलहरू एनएचएस नर्सहरू द्वारा बनाइएका छन् जसले सार्कोडोसिसको व्यक्तिगत अनुभव छ। तिनीहरू विशेषज्ञ हुन् जसले समानुभूति प्रदान गर्छन् र कान सुन्छन्। एक कलको समय तालिकाबद्ध गर्नुहोस्.
SarcoidosisUK समर्थन समूह सञ्जालले यूके, प्लाईमोउथबाट पर्थमा फैल्यो। हाम्रा समूहहरू साँच्चै मित्रवत छन् र कसैलाई आमन्त्रित छन्! उनीहरू सामुदायिक केन्द्रहरू, चर्च हलहरू र अस्पतालहरूमा हरेक 4-6 हप्ता भेट्छन् र सार्कोडोसिससँग अचम्मका स्वयंसेवकहरूले चलाउँछन्। तपाईको स्थानीय समूह पत्ता लगाउनुहोस् वा आफ्नै आफु सुरु गर्नुहोस्.
हाम्रो अनलाइन फोरम सही सार्क हो जुन सर्कोडोसिस अनलाइनको साथ अरूबाट सहयोग खोज्न। SarcoidosisUK फेसबुक समूह कुनै पनि sarcoidosis सम्बन्धी विषय को बारे मा सामान्य छलफल को लागि एकदम सही छ। निजी SarcoidosisUK फोरम सोशल मिडियाबाट छलफलका लागि गोप्य ठाउँ हो। अहिले सामेल हुनुहोस।
हामी अद्भुत समर्थन SarcoidosisUK प्रदान गर्दछन्। तर यसको कुनै पनि बिना दान बिना सम्भव छ। यदि तपाईंले हाम्रो समर्थन सेवाबाट लाभ उठाउनुभयो भने, कृपया आज दान गर्न विचार गर्नुहोस्.
हेड सपोर्ट सर्विसेज, सर्कोडोसिसयू
यो एक एनआरएस नर्सहरु द्वारा संचालित एक गोपनीय टेलीफोन सेवा sarccidosis को व्यक्तिगत अनुभव संग संचालित छ। तपाईं कुनै पनि चिकित्सा प्रश्नहरु मार्फत कुरा गर्न सक्नुहुनेछ। यो sarcoidosis जानकारी र आश्वासन द्वारा प्रभावित कुनै पनि प्रदान गर्न पर्छ।
हाम्रा समूहहरू साँच्चै मित्रवत छन् - सार्ककोडोसिस द्वारा प्रभावित हुने सबैलाई स्वागत छ। यो सर्चोइडोसिसका अनुभवहरू साझेदारी गर्न अरू अरूबाट सिक्ने व्यक्तिहरूले वास्तवमा बुझ्न, सुनेका छन।
SarcoidosisUK हाम्रो फेसबुक ग्रुप र गोप्य अनलाइन फोरममा सक्रिय अनलाइन समर्थन समुदायहरू छन्। यी प्रश्नहरू सोध्नका लागि उत्कृष्ट स्थानहरू छन् र अन्य व्यक्तिका अनुभवहरू बारे थप जान्नुहोस्।
अनलाइन समर्थन खोज्नुहोस्